Xayawaanka kaynta: sifooyinka, deegaanka iyo xiisaha | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Deegaanka
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah hab-nololeedyo ay xayawaanku ku nool yihiin oo ay ku koraan. Kiiskan, Xoolaha kaynta waxay horumariyeen oo la qabsadeen deegaankan si ay u wanaajiyaan badbaadadooda. Waxaa jira noocyo badan oo ku nool kaynta oo mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay leedahay gaar gaar ah.
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonaa dhammaan sifooyinka, habka nolosha iyo horumarinta xayawaanka kaynta.
2 Xayawaanka kaynta sida waafaqsan nidaamka deegaanka
3 Noocyada keymaha
4 sifooyinka xoolaha
Xayawaanka kaymaha waa kuwa ka soo jeeda deegaankooda kaynta biome. Taas oo ah, latitudes kala duwan ee meereheena, geedaha iyo duurka ayaa aad u cufan ama ka yar. Maaddaama aysan jirin hab deegaan oo keligiis loogu yeeri karo "kayn", laakiin labadaba kaymaha kulaylaha sida taiga Arctic waxay ku midaysan yihiin ereyga, Xayawaanka kaynta waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah.
Kaymaha, sida aan u naqaanno, ayaa aad muhiim ugu ah nolosha. Dhanka kale, waxay ku nool yihiin noocyo badan oo kala duwan oo xayawaan ah kuwaas oo isku daraya cuntada ama wareegyada nafaqeynta, hadday yihiin laamahooda, xididadooda, jirkooda ama agagaarka ubaxooda iyo miraha. Dhanka kale, waxay soo saaraan xaddi badan oo ogsijiin jawiga hawada ku jira, waxay sidoo kale hagaajiyaan kaarboonka kaarboon laba ogsaydh (carbon dioxide) waxayna ilaalinayaan cimilada dhulka.
Xayawaanka kaynta sida waafaqsan nidaamka deegaanka
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah nidaamka deegaanka ee kaymaha dhexdooda waxaana jira noocyo kala duwan oo iyaga la xiriira. Aan aragno mid walba waxa uu yahay:
Kaymaha qoyan ee kulaylaha iyo kulaalaha hoose ama kaynta roobka: Rah, toads, balanbaalis, caaro, mas, daanyeerka, xasharaadka, shimbiraha qalaad iyo naasleyda ayaa halkan ku nool.
Kaymo qalalan oo kulaylaha ah iyo kuwa hoose: Xayawaanka, shimbiraha, naasleyda aad u badan sida deerada, jiirarka, masaska cimilada qalalan, daayeerrada yaryar sida chimpanzees iyo dhammaan noocyada cayayaanada ah ayaa halkan ku nool.
kaymaha coniferous subtropical: Waxa kale oo loo yaqaan magaca kaynta geed. Halkaan waxaan ka heleynaa xayawaano ay ka mid yihiin shimbiraha ugaadhsiga, dugaag kale oo rar ah, xayawaanno waaweyn sida shabeelka, daanyeerka yar yar iyo naasleyda sida caajiska.
Kaymaha kulul iyo kuwa isku dhafan: waxaynu ka heli karnaa deerada, ugaadha duurjoogta ah, dabagalayaasha, gorgorka, masaska yaryar sida shacaab, canid, iwm.
Kaymaha conifers ah ee kulul: Nidaamyadan deegaanka waxaan ka heli karnaa noocyo ay ka mid yihiin moose, dawaco, lynx, deerada, hawdka iyo qaar ka mid ah noocyada yaryar ee xamaaratada.
Kaymaha boreal ama taigas: Waxaan heli karnaa bahalo waaweyn, yeyda, shimbiraha ugaadhsiga sida gorgorka, kalluunka buuraha sida salmon, marmots, iwm.
Kaymaha Mediterranean: Nidaamyada deegaanka, dhammaan noocyada shimbiraha ayaa ka soo baxa, sida gabdhaha, xayawaanka, xayawaanka, noocyada kale ee naasleyda sida riyaha buuraha, ugaadhsiga sida cawska cawlan, xamaaratada iyo amfibiyaanka.
Mangroves: Xayawaanka sida kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo kuwa yar yar, carsaanyo iyo bivalves sida lohod iyo mossels, shimbiraha kalluumaysiga, caimans iyo yaxaaska ayaa horumariyo deegaankan.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo kala saaro kaymaha, laakiin si loo arko midka ugu muhiimsan ee daraasadda xayawaanka kaynta, fiiro gaar ah u yeelo habka ay soo jeedisay WWF (Sanduuqa Duurjoogta Adduunka) si loo kala saaro kaymaha biomes:
Kaymaha qoyan ee kulaylaha iyo kulaalaha hoose ama kaymaha roobaadka. Waxay ku yaalliin kulaylaha waxayna soo bandhigaan geedo cufan, dhaadheer, qaab-dhismeedka joogtada ah ee kulaylaha iyo cimilo qabow oo leh huurka sare iyo roobka.
Kaymo qalalan oo caleen iyo qalalan leh Waxay ku yaalliin loolka kulaale iyo kuwa hoose, waxay beddelaan xilliyo gaaban oo roobab xilliyeed ah oo leh muddo dheer oo abaar ah, oo leh dhir cufan ama cufan.
Kaymaha konferous-ka-hoosaadka ah ama geed geedeedka. Waxaa lagu qaybiyaa inta badan meelaha cimilo-hoosaadka hoose ee qoyan, oo leh xilli qalalan oo dheer iyo roobab yar, oo u badan kaymo coniferous iyo ballaran oo isku dhafan.
Caleen iyo kayn dhexdhexaad ah oo isku dhafan. Caadi ahaan cimilo dhexdhexaad ah, oo leh kala duwanaansho heerkul badan iyo roobab, ayaa soo bandhigaya inta badan angiosperms (dhirta ubaxa), oo inta badan lagu qaso noocyada goysa iyo laurels.
kaymaha coniferous dhexdhexaad ah. Dhirta weligood cagaarka ah, guud ahaan meelaha sare (sida kaymaha subalpine), waxay ku badan yihiin cimilo qabow oo leh xagaaga kulaylka iyo jiilaalka qabow, roobab badan, iyo badiyaa of conifers.
kaynta boreal ama taiga. Inta badan waa kaymo coniferous ah, in kasta oo ay jiraan kaymo isku dhafan oo marmar ah, oo ku yaal meel u dhow wareegga polar, sidaas darteed waxay la kulmaan cimilo qabow oo leh xagaaga khafiif ah iyo jiilaal khafiif ah iyo jiilaal daran, halkaas oo khasaaraha qoyaanku uu aad u sarreeyo iyo noocyada ay tahay inay la qabsadaan.
Kaynta Mediterranean ama durissilva. Sida magaceedu tilmaamayo, dhirtani waxay ka soo jeedaan cimilada Mediterranean-ka caadiga ah, oo leh roobab badan oo guga ah oo nafaqeeya geedaha iyo geedaha ku jira jawiga xagaaga qalalan, dayrta diiran iyo jiilaalka khafiifka ah, nafaqeeya dhirta. Had iyo jeer waxay ku sugan yihiin wejiga galbeed ee qaaradda.
Mangroves. Isku darka dhirta ee noocyada aadka u adkaysta milixda iyo biyaha, oo ku badan aagagga intertidal ama estuaries ee gobollada kulaylaha ama kulaylaha hoose ee meeraha. Waxay soo bandhigaan kala duwanaansho bayooloji iyo amphibian oo aad u weyn.
Xayawaanka ku nool kaymaha qabow: Xayawaanka ku nool kaymaha qabow waxaa inta badan lagu gartaa inay leeyihiin dhogor qaro weyn leh oo leh lakab aad u weyn oo dufan ah si ay ugu kululaadaan heerkulka hooseeya.
Xayawaanka ku nool kaynta kulaylaha: Xayawaanka ku nool kaymaha kulaylaha dhogorta hodanka ah ma haystaanTaas lidkeeda, sababtoo ah kaymahan cimilada qoyan iyo diiran ayaa u badan.
Xayawaanka ku nool kaynta kulaylaha: Xayawaanka kaymaha kulaylaha ah waxay kori karaan geedo dhaadheer, taas oo ah dabeecadda deegaankan. Guud ahaan, xayawaanka duurku waxay la qabsadaan isbeddelka iyo sifooyinka deegaan kasta oo ay ku nool yihiin.
Sida sifooyinka, sida xayawaanka kaymaha u quudiyaan waxay ku xirnaan doontaa bayoolajiga ay ku dhaleen, siday yihiin waxay ku xiran tahay cimilada, flora iyo noocyada kale ee xayawaanka ku nool.
Tusaale ahaan, bahasooyinka ku nool kaymaha heerkulka aad u hooseeya iyo jiilaalka aadka u daran waxay u badan yihiin inay ugaarsadaan oo wax cunaan inta suurtogalka ah xilliyada kale si ay u galaan marxaladda hurdo, taas oo ay seexan doonaan inta lagu jiro jiilaalka, markaa ha lumin tamartaada. .
Xayawaanka kale waxay doortaan inay u guuraan kaymo la mid ah in si habboon loo quudiyo xilliga jiilaalka qabow. Dhanka kale, nooca kaynta, dhammaan xayawaanku waxay sameeyaan xeelado ay ku noolaadaan, sida ugaarsiga, kalluumeysiga ama ururinta.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto xayawaanka kala duwan ee kaynta iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Xoolaha kaynta